Mila ho isan’andro ny fanafihana “Cash point” sy “Shop Airtel”: tafaporitsaka niaraka amin’ny vola 5 tapitrisa ireo jiolahy teny Itaosy | NewsMada
Mila ho isan’andro ny fanafihana “Cash point” sy “Shop Airtel”: tafaporitsaka niaraka amin’ny vola 5 tapitrisa ireo jiolahy teny Itaosy
Mifamahofaho ny vaovao momba ilay fanafihana sy fandrobana “Shop Airtel”, teny amin’ny Cites des assureurs Itaosy, omaly tolakandro. Hoe efa voahodidin’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana ilay toerana. Voalaza indray anefa fa hoe tafaporitsaka, niaraka amin’ny volabe 5 tapitrisa Ar izy ireo.
Taitra ny mponin’Itaosy. Omaly tokony ho tamin’ny 05 ora hariva, jiolahy roa lahy nirongo basy sy sabatra ary tsy nisaron-tava no niditra an-keriny tao amin’ny Shop Airtel iray teny amin’ny “Ankany sambatra”, cité des Assureurs. Vokany, voaroban’ireo jiolahy ny vola mitentina 5 Tapitrisa Ar sy finday maromaron’ilay vehivavy sahabo ho 50 taona, tompon’ilay toerana rehefa norahonan’ireo jiolahy tamin’ny basy sy sabatra ireo tao anatin’ny tsena. Nambaran’ny loharanom-baovao iray hafa fa nohidin’ilay vehivavy iray mpanampy io tompona Shop Airtel io, ny tsena tamin’izany, antony nahatonga ny feo niely sy niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera rehetra ny amin’ny fanaovana takalonaina ireo lasibatry ny jiolahy. Tafatsoaka anefa ireo jiolahy taorian’izay ary tsy fantatra hatreto izay toerana mety ahitana azy ireo, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny polisim-pirenena. Nambaran’ny tompon’andrikitry ny seraseran’ny polisy ihany koa fa raikitra avy hatrany ny fanadihadiana sy fikarohana ireo olon-dratsy izay iarahan’ny kaomisarian’Itaosy, ny SAG, ny UIR ary ny zandary, taorian’izay.
Tsy nisy ny vono olona…
Nirefodrefotra ny basy teny Itaosy, omaly, nanao tifi-danitra ireo mpitandro filaminana teny an-toerana ho fisamborana ireo jiolahy. Nitangorona ihany koa ny olona raha vao naheno ny vaovao niparitaka. Nizara sy nilaza ny zavatra henony avy ireo mpikirakira “Facebook” sasantsasany, tao ihany koa ny nizara horonan-tsary. Teo no nilaza fa nodidian’ny mpitandro filaminana sy ny mpitandro filaminana samihafa ny Shop Airtel ho fisamborana ireo olon-dratsy kanefa tafaporitsaka izy ireo, teo ihany koa ny fiaran’ny mpitandro filaminana izay nirimorimo nafy dia mafy niala ny toerana taorian’izay…
Nohamarinin’ny mpitsabo ny toe-pahasalaman’ilay vehivavy voalaza fa natao takalonaina, tsy nahitana diana vono na ratra ny tenan’ity farany.
Lasibatr’ireo mpanao ratsy mihitsy ankehitriny ireo cash point sy point mobile money, tao anatin’ny herinandro vitsy izay. Tsy latsaky ny efatra no niharan’ny fandroban’ireo olon-dratsy, izay sahy mihitsy tsy misaron-tava manao ny asa ratsiny ary amin’ny andro mazava avokoa no nisehoan’izany. Ohatra amin’izany ny fanafihana tompona cash point teny Ampasanimalo, ny teny Ivandry, Anosizato, vao tsy ela akory ny teny Ankadindramamy ary ity vao nitranga, omaly teny Itaosy ity. Antapitrisany avokoa ny vola lasan’ireo mpanao ratsy tamin’ny fandrobana ary mitifitra izy ireo amin’ny fanaovany ny asa ratsiny. Efa manomboka miparitaka any amin’ny faritra izany ny fanafihana mitam-basy izany. Tsiahivina fa vao ny asabotsy teo no nanafika shop Airtel ny jiolahy tao Ambositra.